Cynthia Mamle Morrison - Wikipedia
Cynthia Mamle Morrison a ɔwoo no wɔ ɔpepon bosome da a etɔ so du-nson, wɔ afe apem aha_nkron aduosia nan yɛ amanyɔ nii a ɔfiri Ghana ena ɔsane ka New Patriotic Party amanyɔkuo no ho. Mprenpren ɔyɛ mmerahyɛ badwanii a ɔhwɛ Agona West mpɛsuaso. Wɔ ɔsanaa bosome da a etɔ so nkron mfeɛ mpem mmienu ne du-nnwɔtwe mu no, ɔtoo wɔn nsa ferɛ no sɛ ɔmɛ yɛ ɔmansaofoɔ a ɔhwɛ mmaa ne mmerema, nkɔdaa ne ahobanbɔ so a ɛyɛ ɔmanpanin Nana Akuffo Addo na ɔferɛ no.
1 Nkɔdaa Birem Abrabɔ ne Sukuusem
2 ɔno Ankasa N'abrabɔ
3 Nádɔeɛ ne N'abrabɔ
Nkɔdaa Birem Abrabɔ ne Sukuusem
ɔwoo Cynthia wɔ ɔpɛpɔn bosome da etɔ so du-nson wɔ afe apem aha-nkron aduosia na wɔ Elmina mfimfini mant3m. ɔgyee tikya 'training' abɔdini krataa wɔ Maria Montessori "training" suapɔn no mu wɔ afe apem aha_nkron aduokrom mmienu, ɔsane nso wɔ aduane noa mu abodini krataa.
ɔno Ankasa N'abrabɔ
ɔware Herbert Morrisson a ɔne no wɔ nkɔdaa nson. ɔyɛ Kristo nii.
Nádɔeɛ ne N'abrabɔ
Mrs. Cynthia Morrison dii mfeɛ aduonum mmienu no, ɔyɛɛ adeɛ de noɔma bi te sɛ nkɔnwa a ayarefoɔ tena mu, adeɛ a ɛboa anifrafoɔ ne krɔɔkye kɔ kɔkyɛɛɛ se ɛka n'awodadie no ho.
Cynthia sii akan na ɔdii New Patriotic Party mmerahyɛbadwan akonnwa no maa Agona West mpɛsuaso wɔ mfimfini mantɛm .ɔdii saa akansie yi wɔ mfeɛ mpem mmienu ne du nsia abatoɔ no mu.Nkrɔfoɔ mmienu bi nso a ɔmo sii akan no bi a ɔmo de Charles Obeng Inkoom a ɔwɔ National Democratic Congress kuo no mu ne Eans Inkoom a ɔwɔ Conventions People Party nso sii akan no bi wɔ mfeɛ mpem mmienu ne du-nsia abatoɔ ketoa no mu wɔ Agona West mpɛsuaso. Aba a na ɛye 56,876 no, Cynthia nyaa mu 32,770 a ɛkyerɛse wánya ɔha mu nkyikye mu 58.03 wɔ aba no mu.
Retrieved from "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Cynthia_Mamle_Morrison&oldid=19671"
This page was last edited on 1 June 2019, at 15:45.